Bhizinesi Kiredhiti Matipi Ekubatsira Kukwereta Mari kune Yako Kambani
Bhizinesi Chikwereti Matipi
Zvakanakira Makambani Akakwegura eBhizinesi Chikwereti
Kutenga mubatanidzwa une makore akati wandei kunogona kukubatsira iwe kuvaka chikwereti munzira dzinoverengeka. Kunyanya, mushure mekunge nhoroondo yako yechikwereti yagadzirwa uye iwe uine zvimwe zvakataurwa zviitiko zvekubhadhara kwakanaka, zvimwe zviyero zvinotanga kupinda mukutamba. Imwe yeaya marongero kuve zera rebato rako repamutemo uye bhizinesi. Paunenge uchivaka kiredhiti kune rako bhizinesi, iwe unoda kuve neakawanda se "tie breakers" kudivi rako sezvaunogona. Kana iwe uchifunga nezvazvo saizvozvo, iwe unozotanga kuona maitiro aungaisa zvimwe kudivi rako nematurusi aripo. Iyi nhaurwa ndeye makore akwegura masherufu makambani uye makambani.
Uchishandisa Yemunhu Chikwereti Zvikamu Kuvaka Bhizinesi Chikwereti
Kuvaka bhizinesi chikwereti rwendo uye kunogona kuve kwakaomarara. Kushandisa zvese zvaunowana zviwanikwa uye maturusi zvinogona kunge zviri mukati mekunyaradza kwako. Izvi zvinoenderana nechinzvimbo cheumwe neumwe muzvinabhizimusi uye nyaradzo, zvisinei kune dzimwe nzira dzinogona kutakura nhanho yekumhanyisa kumhanyisa munzira yekuvaka chikwereti. Iwe unogona kunyorera chebhizinesi kiredhiti kadhi uye shandisa yako wega kiredhiti mamaki kuti ubvumidzwe. Iko kuita kwechikwereti hakuoneke pane yako pachako kiredhiti profiles uye kunongoonekwa chete pane rako bhizinesi chikwereti chimiro muzita rebhizinesi Tsvaga zvimwe pamusoro pekushandisa yako wega kiredhiti kukufambisira iwe pane yekambani chikwereti kuvaka rwendo.
Ndezvipi Kiredhiti Kuteerera Kunotarisa Kunyorera Kubhizinesi Rako?
Sezvo musoro wenyaya wekuteerera bhizinesi, uri hwaro hwekuvaka bhizinesi kiredhiti, unouya pamusoro peanopfuura, unomutsa mubvunzo, ndezvipi zvinhu zvekuteerera zvinoshanda kwauri nebhizinesi rako? Chokwadi ndechekuti, pane mazana ezvinhu chimwe nechimwe chine zvishoma zvine mamiriro ezvinhu… izvo zvinomiririra mukana wezviuru zvekuteerera cheki zvinogoneka. Kuderedza izvi pasi ibasa rebhizinesi rechikwereti nyanzvi. Kuitisa kuti rako bhizinesi riongororwe kuti zvive nyore uye zvakatarwa kutevedzera cheki zvinofanirwa kuitwa. Dzidza zvakawanda nezve izvo zvinoreva macheki pano.
Yakakwira Njodzi Bhizinesi Kiredhiti - Chii icho uye Maitiro ekuzvidzivirira
Kunyorwa se "njodzi huru" mune bhizinesi kiredhiti kunenge kuri 'kutsvoda kwerufu'. Izvo zvinotsanangudza chingangoitika apa inyaya yakaoma uye kazhinji inodhura maitiro ekugadzirisa zvemakambani kuitira kuti bhizinesi rako ritange nekachena kiredhiti slate zvakare. Makambani ekuzivisa zvikwereti uye emahofisi ane nzira dzakaomarara dzekuongorora bhizinesi rako kwezviuru zvemacheki uye mhedzisiro yezvinhu zvekuteerera kana zviitwa zviripo kutengwa nenzira yenhoroondo yebhizinesi kana mushumo wechikwereti. Kana bhizinesi rako risina kugadzirira maitiro echikwereti, uye riine kiredhiti chiitiko chiri kutaurwa pasina kutevedza kwakakodzera, munhu wese anokwanisa kuwana iyo ruzivo kubva kumahofisi ekuzivisa. Mhedzisiro yacho? Yako bhizinesi chikwereti nhoroondo yakanyorwa yakanyanya njodzi. Tsvaga nzira yekudzivirira iyi mhando yedambudziko.
Kana Mukana Ukagogodza… Bhizinesi Kiredhiti Mhinduro
Kazhinji yenguva varidzi vebhizinesi vanotarisa kuve nekweretesi se "neti yekuchengetedza" kana zviwanikwa zvekuwedzera kuti uwane kuburikidza nenzvimbo yakaoma. Kuva nechikwereti chebhizinesi rako kuchaita izvo chete uye unogona kusungirira pane yako mari. Asi kana bhizinesi rako riine chikwereti chakasimba, iwe une musuwo wakazaruka kumukana. Wese muzvinabhizimusi anonzwisisa mukana… asi anorega kuongorora kuti bhizinesi kiredhiti rinoita basa rakakosha sei pano.
Bhizinesi Kiredhiti Ekuzivisa Agency
Kazhinji yenguva kana zvasvika kubhizinesi rechikwereti kuburitsa, iwe unonzwa D&B, Experian neEquifax, zvisinei hazvo mamwe mareti echikwereti ari kushambadzira. Iwe unozoona bhizinesi rechikwereti chikwereti, zvigadzirwa uye masevhisi ayo anobatsira varidzi vebhizimusi kubata yavo kiredhiti profile uye vape mishumo uye data kune avo vaunogona kunge uchipa chikwereti kuna. Isu takaisa pamwechete runyorwa rwe ese echikwereti ekuzivisa mahofisi uye maamendi kwaunowana bhizinesi rechikwereti masevhisi.
Kukosha kweBusiness Chikwereti Kuteerera
Kunyangwe iri kuyedza kubuda uye kunowana kiredhiti kune rako bhizinesi ipapo ipapo, kugadzirirwa kwebhizinesi rako 'kuteedzera ingangove iri yakakosha chikamu chebhizinesi chikwereti kuvaka maitiro. Paunotanga kushanda nevanopa mari, vasina kuchengetedzeka vanopa zvikwereti nemabhangi, ako marekodhi marekodhi uye sangano rinofanirwa kuve riine hutano hwakakwana. Kusvetuka matanho ekuteerera chikwereti, kana izvo zvatinodaidza kuti bhizinesi rechikwereti mabhuroko, zvinogona kukusiya iwe uchiita aya mabasa mushure mechokwadi, izvo zvingangove zvakatonyanya kunetsa. Isu tinoputsa zvidhinha zvekuvaka mumapoka uye tinotsanangura kukosha kwekuvaka bhizinesi kiredhiti nenzira kwayo kubva pakutanga.
Yakakwira Njodzi Bhizinesi Kiredhiti - Izvo Chaizvo uye Maitiro Ekuzvidzivirira
Bhizinesi Kiredhiti Nhau
Ndeapi Bhizinesi Kiredhiti Kuteedzera Anoongorora Kunyorera Kwauri?